China Cfhs andian-tsarimihetsika azo avadika arc | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery Cfhs arc dia misy ny takela-by misy vy tsy misy fangarony, rindrina ary tohana. Misy zana-kazo mihodina afovoany eo afovoan'ny sarin'ny efijery, ary ny fefy lamba dia afaka mihodina 180 degre amin'ny axis rotation afovoany. Ny efijery efijery dia tsy mila disassembled sy soloina, ka manalava ny fiainana serivisy ny efijery. Ny slurry arintany dia mihetsika manaraka ny velaran'ny efijery miolaka. Rehefa mandalo bara sivana dia simba ny fihenjanan'ny rano amin'ny sombin-javatra eo amin'ny zoro eo anelanelan'ny fikorianan'ny rano sy ny zoro maranitra eo amin'ny takelaka lamba, noho izany dia tapahina ny ampahany amin'ny rano sy ny sombin-javatra madinidinika mba ho lasa fitaovana eo ambanin'ny efijery.
Fitsipika miasa sy toetra mampiavaka ny efijery arc wfhs.
Ny efijery Wfhs arc dia matetika misy ny takelaka vy tsy misy vy, ny rindrina ary ny fanohanana. Misy zana-kazo mihodina afovoany eo afovoan'ny sarin'ny efijery, ary ny fefy lamba dia afaka mihodina 180 degre amin'ny axis rotation afovoany. Ny efijery efijery dia tsy mila disassembled sy soloina, ka manalava ny fiainana serivisy ny efijery. Ny slurry arintany dia mihetsika manaraka ny velaran'ny efijery miolaka. Rehefa mandalo bara sivana dia simba ny fihenjanan'ny rano amin'ny sombin-javatra eo amin'ny zoro eo anelanelan'ny fikorianan'ny rano sy ny zoro maranitra eo amin'ny takelaka lamba, noho izany dia tapahina ny ampahany amin'ny rano sy ny sombin-javatra madinidinika mba ho lasa fitaovana eo ambanin'ny efijery.
Model Fahaizan'ny fitsaboana m³/ h Refy mm
CFHS-0920ⅲ 85-180 1580 * 1020 * 3715
CFHS-1220ⅲ 115-240 1580 * 1320 * 3715
CFHS-1520ⅲ 145-300 1580 * 1620 * 3715
CFHS-1820ⅲ 175-360 1580 * 1920 * 3715
CFHS-2120ⅲ 205-420 1580 * 2220 * 3715
CFHS-2420ⅲ 235-480 1580 * 2520 * 3715
CFHS-3000ⅲ 295-600 1580 * 3100 * 3715
CFHS-3200ⅲ 330-650 1580 * 3300 * 3715
CFHS-0920ⅳ 115-240 1810 * 1020 * 3905
CFHS-1220ⅳ 156-320 1810 * 1320 * 3905
CFHS-1520ⅳ 195-400 1810 * 1620 * 3905
CFHS-1820ⅳ 234-480 1810 * 1920 * 3905
CFHS-2120ⅳ 272-560 1810 * 2220 * 3905
CFHS-2420ⅳ 312-560 1810 * 2520 * 3905
CFHS-3000ⅳ 392-720 1810 * 3120 * 3905
CFHS-3200ⅳ 430-800 1810 * 3300 * 3905
Previous: Sarimihetsika mihetsiketsika miovaova amin'ny akondro
Manaraka: Efijery roller azo ahitsy CGS banga
Pikantsary Arc Vibrating